Kavina fanetezana ondry kilasika
Vita amin'ny hoditr'ondry tena izy, ny hoditry ny Suède ondry dia sady mafana no miaina. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelan'ny trano amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-001 ● ondry 100% Fanetezana sy Suède ● Volonondry lava: 1.6cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe, volondavenona sy loko hafa ● Mafana sy mandroaka ny hamandoana ● Volavola lamaody sy tena mety, haben'ny olona
tena volom-borona manety volon'ondry
Vita amin'ny suède tsara indrindra sy tena manety volon'ondry. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-002 ● Misy antsipiriany roa amin'ny buckles ● Suède tena izy any ivelany, firakofana manety volon'ondry marevaka ● Volon'ondry lava: 1.2cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe, mavokely volondavenona ary loko hafa ● Volavola lamaody sy tena mety, haben'ny olona
Kodiarana suède Suède Classical
Vita amin'ny fanetezana tena izy, ny hoditra Suède dia sady mafana no miaina. ny volom-borona manarona dia malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelan'ny trano amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-008 ● Volo vita amin'ny volon'ondry sy volon'ondry tena volon'ondry ● Volon'ondry lava: 1.2cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe ary loko hafa ● Mafana sy mandroaka ny hamandoana ● Volavola lamaody sy tena mety, haben'ny olona
Kofehy fanenon-drongony mihodinkodina tena izy
Namboarina tamin'ny hoditr'ondry iray manontolo, sady mafana no mifoka rivotra. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-007 ● vita amin'ny hoditr'ondry manontolo ● Volon'ondry lava: 1.2cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe ary loko hafa ● Volavola lamaody ary tena mety, haben'ny olona
Vita amin'ny Suède tena izy ivelany, ary volon'ondry volon'ondry manety volom-borona. Hoditra mafana dia sady mafana no miaina. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-006 ● Grad tena suede ivelany ● volon'ondry volon'ondry manety volon'ondry ● Volon'ondry lava: 1.6cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe, volondavenona sy loko hafa ● Volavola lamaody sy tena mety, haben'ny olona
ny volon'ondry volon'ondry volom-borona tena misy volony amin'ny volo ivelany
Vita amin'ny volon'ondry manja sy volon'ondry knitting. Mafana sy miaina. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-003 ● volon'ondry ivelany manja ● Volon'ondry manety volon'ondry be volon'ondry ● Volon'ondry lava: 1.6cm ● Loko: mainty, chestnut.grey ary loko hafa ● Volavola lamaody sy mety tsara, Habe habe
lamaody volon'ondry volon'ondry tena izy
Vita amin'ny suède tsara indrindra sy tena manety volon'ondry. Ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Namboarina sy namboarina tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany amin'ny ririnina ● Andininy laharana: EF-003 ● Antsipirian'ny sarimihetsika misy endrika ● Suède tena izy any ivelany, lamba firakofana ondry manja-mena ● volonondry lava: 1.6cm ● Loko: mainty, chestnut.coffe, mavokely volondavenona ary loko hafa ● Volavola lamaody sy tena mety, haben'ny olona
vehivavy mitafy hoditr'ondry akanjo lava satroka
Volavola tsotra. Tsy misy antsipirihany mampihetsi-po, Ity Hat ity dia vita avy amin'ny hoditr'ondry avo roa heny amin'ny volon'ondry, volon'ondry manarona matevina ao anaty lasitra ho an'ny volon-dohanao mamorona insulated voajanahary. Mampiseho molotra tsy mahazatra, tsara indrindra ho an'ny fotoana akanjo na mahazatra. ● Andininy laharana: HW-023C ● hoditr'ondry tena 100% ● Loko: BLACK. ● Madio malalaka ● Namboarina tsara sy mifanaraka tsara, haben'ny habeny
Satroka hodi-biby Unisex hoditra Aviator
Drafitra lamaody ary tena mety. Ity satroka ity dia vita amin'ny hoditr'ondry misy sisiny 2, Ny lafiny ivelany dia misy faran'ny hoditra napa maharitra ary ny lafiny anatiny dia volon'ondry mafana mafana. Mitazona ny lohanao ho mafana sy milamina miaraka amin'ny sofina, handrinao sy hatoka miaraka amin'ity hoditra ririnina kanto ity ary satroka volom-borona, fonosana sofina mafana voasarimakirana mamatotra eo ambanin'ny saokany, eo an-tampon'ny satro-boninahitra, na any aoriana, ny satroka tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany, toa skiing, snowboarding, snowball, fitsangantsanganana, fanatanjahan-tena amin'ny moto, fihazana ary fanatanjahan-tena amin'ny ririnina ....
Unisex manety volon'ondry Visor satroka volony
Volavola tsotra. Tsy misy antsipiriany feno fisalasalana, ity satroka ity dia vita amin'ny hoditr'ondry misy sisiny 2, Ny lafiny ivelany dia misy faran'ny hoditra napa maharitra ary ny lafiny anatiny dia volon'ondry mafana mafana. Volon'ondry matevina ao anaty lasitra ho an'ny volon-dohanao mamorona insulated voajanahary. Ny saron-tsofina mafana mangatsiaka azo atsofoka dia azo ahodina rehefa amin'ny toetr'andro mangatsiaka indrindra. Tsara ho an'ny fotoana akanjo na mahazatra. ● Andininy laharana: HW-020M ● hoditr'ondry tena 100% ● Loko: Camel.nolom-bolo sy loko hafa ● Madio malalaka ● Namboarina tsara sy mety tsara, ...
Napa hoditr'ondry manodidina ny satroka
Vita amin'ny hoditr'ondry napa merino, sady mafana no miaina, ny volon'ondry malefaka nefa matanjaka. Ny kofehin'izy ireo dia mifoka, mihetsika toy ny mpandrindra anaty voajanahary, ity fomba ity dia manana satroboninahitra miendrika kambana miendrika sy fehikibo volom-borona malalaka. tsara indrindra ho an'ny fotoana akanjo na mahazatra amin'ny ririnina ● Andininy laharana: HW-016N ● napa Sheepskin ● Mafana sy mandroaka ny hamandoana ● Madio malalaka ● Namboarina sy namboarina tsara, mety, milanja habe
satroka hoditr'ondry nappa lafo vidy
rendrarendra sy kilasika, vita amin'ny hoditr'ondry napa merino, mafana sy beathable, malefaka nefa matanjaka, Ity fomba ity dia manana satro-boninahitra iray sy fehikibo volon'ondry malalaka misy tsipiriany bokotra. Ny seams rehetra dia mihidy amin'ny famaranana milamina sy tsara tarehy, tsara indrindra ho an'ny fotoana akanjo na mahazatra. ● Andininy laharana: HW-015N ● Hoditra hoditr'ondry 100% tena izy ● Loko: mainty.bolony sy loko hafa ● Madio malalaka ● Namboarina tsara sy mety tsara, vesatra habe